भिसा बोकेर बसेका विद्यार्थीलाई कहिले खुल्ला अस्ट्रेलियाको ढोका ?- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
भिसा बोकेर बसेका विद्यार्थीलाई कहिले खुल्ला अस्ट्रेलियाको ढोका ?
भाद्र १३, २०७८ नारायण खड्का
अस्ट्रेलिया — विराटनगरकी रेश्मा सुवालले अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा लिएर बसेको एक वर्ष भयो । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि बोर्डर खुल्ने आशामा अनलाइन पढिरहेकी उनले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय भएको जानकारी पाएकी छैनन् । त्यस्तै, काठमाडौंका विकल श्रेष्ठ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जान पाउने आशामा एक वर्षदेखि कुरेर बसिरहेका छन् ।
उच्च शिक्षाका लागि भिसा लागेका सयौं नेपाली विद्यार्थी कहिले अस्ट्रेलिया आउन पाइन्छ भनेर पर्खिरहेका छन् । धेरैले नेपालमै अनलाइन पढाइलाई समेत निरन्तरता दिइरहेका छन् । लगभग साम्य भइसकेको कोरोना संक्रमण केही महिनादेखि सिड्नी, मेलबर्नलगायत सहरमा पुनः बढेपछि उनीहरूमा अस्ट्रेलिया आउन पाउने वा नपाउने अन्योल झन् बढेको हो ।
विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया कहिलेदेखि आउन पाउने भन्नेबारे यहाँका सरकारी अधिकारीले समेत खुलस्त पार्न सकिरहेका छैनन् । सरकारद्वारा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएका केही कदमले यसको निर्क्योल गर्ने बताइएको छ । अर्को वर्षको जुलाईदेखि नेपालीसहितका विदेशी विद्यार्थी अस्ट्रेलिया आउन सक्ने सम्भावना रहेको यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको भनाइ छ ।
अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबाट करिब ४० अर्ब डलरबराबर व्यवसाय गरेको छ । यसबाट अस्ट्रेलियाको कृषि, सरसफाइ, हस्पिटालिटी क्षेत्रको आवश्यक जनशक्तिको समेत परिपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसका साथै यहाँका शैक्षिक संस्थाले समेत सरकारलाई विद्यार्थी भित्र्याउनका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । तर, भाइरसको संक्रमण फैलिरहेकाले अस्ट्रेलियाले अर्को वर्षको जुलाईअघि उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थी भित्र्याउने सम्भावना कम छ ।
यस क्षेत्रका जानकार पनि जुलाईदेखि मात्र उल्लेख्य संख्यामा विदेशी विद्यार्थी आउन सक्ने तर्क गर्छन् । उनीहरू अस्ट्रेलियाले न्यूनतम ७० प्रतिशत जनतालाई खोप लगाइसकेपछि र अस्ट्रेलिया आउन चाहने विदेशी विद्यार्थीले यहाँको सरकारले मान्यता दिएको खोप लगाएको खण्डमा प्राथमिकताका आधारमा भित्र्याउन सक्ने बताउँछन् । सिड्नीका वकिल सञ्जीव पाण्डे भन्छन्,‘विदेशी विद्यार्थी नभएका कारण आर्थिक र रोजगार क्षेत्रमा नै असर देखिएकाले सरकारले सकेसम्म छिटो विदेशी विद्यार्थी ल्याउनेछ ।’ उनी सरकारले राखेको लक्ष्य ७० देखि ८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसकेपछि विदेशी विद्यार्थीलाई क्रमिक रूपमा अर्को वर्षको सुरुवातदेखि ल्याउनेमा आशावादी छन् ।
यद्यपि नेपाली विद्यार्थी त्यसका लागि प्राथमिकतामा पर्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको उनी बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा अस्ट्रेलिया आउने पहिलो सम्भावना भनेको सरकारले मान्यता दिएको खोप लगाइसकेकाहरु नै हुन्,’ उनले भने । अस्ट्रेलियाले अहिलेसम्म अस्ट्राजेनेका, फाइजर र मोडर्ना भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । अस्ट्रेलिया आउन चाहने नेपाली विद्यार्थीले समेत सरकारले निर्णय लिइसकेपछि यी तीन भ्याक्सिन लगाएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
खोपका साथै विदेशबाट आउने विद्यार्थीका लागि क्वारेन्टाइन सुविधाको उपलब्धताअनुसार समेत भित्र्याइने योजना सरकारको छ । यसका जनशक्ति अभाव भएका क्षेत्रमा दक्ष रहेकाहरुले प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ । अस्ट्रेलियाली सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा लामो समय काम गरिसकेका डा. कृष्ण हमालसमेत अर्को वर्षको जुलाईदेखि उल्लेख्य मात्रामा विदेशी विद्यार्थी आउने सम्भावना देख्छन् । ‘हो, अहिले आर्थिक रूपमा सरकारलाई धेरै घाटा भइरहेको छ तर पनि खोपको लक्ष्य पूरा नगरीकन तत्कालै विद्यार्थी भित्र्याउने सम्भावना छैन,’ उनले भने । हमाल अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थी ल्याउने नेपाल तेस्रो ठूलो स्रोत–मुलुक भएकाले प्राथमिकतामा पर्न सक्ने सुनाउँछन् । तर पनि यहाँको सरकारले मान्यता दिएको खोप लगाएका विद्यार्थी नै प्राथमिकतामा पर्ने उनी दाबी गर्छन् ।
विद्यार्थी भित्र्याउन लागि न्यु साउथ वेल्स र भिक्टोरियाले नमुना कार्यक्रम ल्याउने जनाएका थिए तर संक्रमण बढेका कारण न्यु साउथ वेल्सले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । भिक्टोरियाले सुरक्षित भएपछि विद्यार्थी ल्याउने जनाएको छ । यसका साथै दक्षिण अस्ट्रेलियाले समेत यस्तै नमुना कार्यक्रममार्फत विदेशी विद्यार्थी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
अहिले अस्ट्रेलिया आउन सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । अस्ट्रेलियाले यही वर्षको अन्त्यसम्ममा ७० देखि ८० प्रतिशत नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसक्ने योजनाका साथ कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेको छ । अस्ट्रेलियास्थित स्वास्थ्य विभागका अनुसार अहिलेसम्म १६ वर्षमाथिका ५७ प्रतिशत अस्ट्रेलियाली नागरिकले कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप लगाइसकेका छन् भने ३३ दशमलव ७ प्रतिशतले दुवै खोप लगाइसकेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७८ १३:१८
चितुवाको छाला र खप्परसहित तीनजना पक्राउ
भाद्र १३, २०७८ सम्झना रसाइली
तनहुँ — जिल्लाको व्यास नगरपालिका–५ पतेनीस्थित पक्कीपुल नजिक बाखेतर्फ जाने स्थानबाट चितुवाको आखेटोपहारसहित प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट चितुवाको छाला, खप्पर लगायत शरीरका विभिन्न अंगका हड्डी बरामद गरेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौं र प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट खटिएको संयुक्त टोलीले उक्त स्थानबाट शनिबार राति ती युवाहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा व्यास–६ सिरुबारीका ३९ वर्षीय अर्जुन श्रेष्ठ, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ ओखल्दी बस्ने ४० वर्षीय सन्जित गुरुङ र शुक्लागण्डकी–१ रतनपुरका ३२ वर्षीय सन्तोष गुरुङ रहेको जिल्लाका प्रहरी निरीक्षक शिवराज क्षेत्रीले जानकारी गराए ।
‘एकान्त स्थानको चोकमा शंकास्पद गतिविधि गरिरहेका उनीहरुलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको रोहवरमा नियन्त्रणमा लिई खानतलासी गर्दा उनीहरुको साथबाट चितुवाको छाला, दाँत, हड्डी र खप्पर लगायतका वस्तु बरामद गरिएको हो,’ उनले भने, ‘पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धानका लागि डिभिजन वन कार्यालय तनहुँमा पठाइएको छ ।’
प्रहरीले अर्जुनको साथबाट ५ फिट ७ इन्च लम्बाइ २ फिट ५ इन्च चौडाइ भएको र ३ फिट लम्बाइ एक फिट ५ इन्च चौडाइ भएको चितुवाको दुईवटा छाला र स्कुटर बरामद गरेको छ । यस्तै, सन्जितको साथबाट चितुवाका शरीरको विभिन्न भागका हड्डीहरु सानो ठूलो गरी १२२ थान र कालो रङको पल्सर मोटसाइकल बरामद गरिएको छ । प्रहरीले सन्तोषको साथबाट पल्सर मोटरसाइकल र ३ हजार पाँच सय रुपैयाँ नगद बरामद गरेको छ ।
बरामद भएका खप्पर र हड्डी प्रहरीले बाघको भनेपनि प्रयोगशालामा अनुसन्धान गरेपछि मात्र एकिन गर्न सकिने डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका सहायक वन अधिकृत अरुण पराजुलीले बताए । उनले भने, ‘छालाको फोटो हेरेरै चितुवाको हो भन्न सकिन्छ तर बरामद भएका छाला, खप्पर र हड्डी भने अहिलेसम्म वन कार्यालयमा आइपुगेको छैन ।’